China HY288 Warp Knitting Machine yoMvelisi kunye noMthengisi | UAoyuan
Lo matshini uqhuba iindawo zokuqhuba usebenzisa iplanethi yokuqhagamshela umatshini werad, ibha yomhlaba yamkela uhlobo lwediski yeN uhlobo lwediski ekhupha isixhobo. I-boram yam isebenzisa i-EBC ye-elektroniki yokuyeka, isixhobo esitshixwayo sisebenzisa i-roller ezine, kwaye sibonelela ngokuhambisa i-roller ezintathu, umatshini unokukhetha i-jacquard esecaleni.
Umatshini wokunitha kunye nendlela yokuluka ye-warp ubukhulu becala yenziwe ngendlela yokuyeka, ukunitha, ukuwela indlela, ukuzoba kunye nokuthatha, indlela yokuhambisa kunye nendlela yokuncedisa. Indlela ukunitha yindlela yayo engundoqo, esetyenziselwa ukwenza ukunitha coil. Ngokweentlobo ezahlukeneyo zeenaliti ezisetyenziswa kumatshini wokunitha, iindawo ezahlukeneyo zokutsala zamkelwe. Amalungu okutshixa ikakhulu abandakanya iinaliti zokunitha, iisinki, izixhobo zokurhola iigridi, iinaliti zesikhokelo somsonto, njl. ke iinaliti ezidityanisiweyo zisetyenziswa ngokubanzi, ngelixa iinaliti zolwimi zisetyenziswa ikakhulu koomatshini bokuluka i-jacquard enkulu.
Ngo-150 "190" 200 "216" 256 "335"
I-600-900r / min
Ukuhamba rhoqo kuguqula isantya esiguqukayo
Iinxalenye eziphambili zelaphu ezenza umatshini wokuluka ziyanitha inaliti, inaliti yesikhokelo somsonto, isinki kunye nokucofa ipleyiti (esetyenziselwa umatshini wokukhonkxa). Iinaliti zokunitha zicwangciswe ngokulandelelana kwibhedi yenaliti kwaye zihamba kunye nebhedi yenaliti. Inaliti yesikhokelo somsonto ifakwe kwibhodi yezitshixo ukwenza ibha yokudibanisa. I-warp idlula emngxunyeni wenaliti yesikhokelo, ihamba nge-bar bar, kwaye inenxeba kwinaliti. Ilaphu lilukiwe ngokuhamba okulungelelanisiweyo kwenaliti yokunitha, isinki kunye namanye amalungu okutsala.
Egqithileyo I-HY399 isantya esiphezulu sebhedi enye yokulala umatshini wokuluka
Okulandelayo: I-HY280 isantya esiphezulu sebhedi enye
Ngesantya esiphezulu umatshini lokuloba net HY299
HY290-I kabini-ukhuko elangeni umatshini net HY290-I ...